Vaovao - Torohevitra momba ny fampiasana sy fikojakojana tavoahangy menaka manitra
Torohevitra momba ny fampiasana sy fikojakojana ireo tavoahangy menaka manitra
Ankoatry ny fikosehana menaka esansiela eny am-pelatananao na ny fidirana amin'ny masinina oxygen-rano, The mpanamboatra tavoahangy tena ilaina ny Shanghai Rainbow Industrial Co., ltd milaza fa azonao atao koa ny mametraka menaka manitra ao anaty “tavoahangy menaka manitra”Ary ento miaraka aminao izy ireo. Afaka mamofona menaka manitra ilaina amin'ny fotoana rehetra ianao hampialana voly anao ~ ny tsena ankehitriny Manisy menaka manitra ilaina "tavoahangy menaka manitra ilaina" ary "tavoahangy menaka tena ilaina mineraly", izay azo ampiasaina amin'ny rojo, peratra, kavina, kavina, mineraly brasele, pendants ary kojakoja hafa. nyFonosana RB Ity manaraka ity dia fanazavana ny fomba fampiasana tavoahangin-tsolika tena ilaina sy ny fitazonana azy ireo.
☆ Ahoana ny fampiasana tavoahangy menaka esory
● Tavoahangy menaka manitra ilaina amin'ny vera
Manomàna lovia kely vera kely na siny kely afaka mitazona menaka esansiela kely, alatsaho ao anaty lovia kely ny menaka manitra arakaraka ny refy, ampiasao ny fanjaitra menaka manitra ilaina hamenoana ny fitrandrahana, ary fenoy ao anaty vera tavoahangy hamita.
● tavoahangy menaka manitra ilaina amin'ny mineraly
Ny menaka esansiela dia azo fenoina amin'ny fomba mitovy amin'ilay tavoahangy menaka manitra ilaina (voalaza ao amin'ilay entana etsy ambony), na ny menaka manitra azo atsofoka mivantana ao anaty tavoahangy amin'ny zoro 45 °. Fampahatsiahivana manokana: namboarina manokana daholo ny satroka tavoahangy ilaina menaka. Mba hisorohana ny bosoa tsy hamaky ny satrony tavoahangy ary hisy fiantraikany amin'ny faharetan'ny velaran-tratra vy tsy miova, azafady, alao antoka fa hanokatra sy hanidy amin'ny fihodinana ianao.
☆ tavoahangy menaka manadio
Ny karazan-tavoahangin-menaka ilaina rehetra dia mila diovina sy diovina isaky ny tapa-bolana. Raha manova menaka esansiela isan-karazany ianao dia mila manadio azy ireo alohan'ny hametrahana fomba hafa. Rehefa manadio, azafady mampiasa alikaola 75% ary aza mampiasa mpanadio hafa.
Mampiasà fanjaitra handrindrana alikaola ao anaty tavoahangy fitaratra ary ahintsano moramora, avy eo minono ny alikaola maloto dia araraka. Avereno in-2 na in-3 ity hetsika ity mba hamenoana ny fanadiovana, ary afaka manohy manampy menaka manitra ilaina ampiasaina ianao.
Rehefa manadio dia alentaho amin'ny alikaola 75% ny tavoahangin-tsolika ilaina mandritra ny 5 minitra, avy eo esory ary hamafana lamba famaohana taratasy. Ny ao anaty tavoahangy menaka esory dia azo diovina amin'ny lapoety kely na mamafa ny fangaro sisa. Ho fanampin'izay, aza atsoboka satroka tavoahangy mihoatra ny 30 segondra mba hisorohana ny bosoa tsy hivonto sy hivaingana na hisy fiantraikany amin'ny faharetan'ny fonon'ny voany manta.
Ny fampahalalana etsy ambony dia karakarain'i Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd.